Miti Yakakosha powder series suppliers - AASraw vatengesi
USA Dzimba Dzokutengesera, Canada Dzimba Dzokuendesa, Dzimba dzekuEurope Dzimba
3rd Labs Kuedzwa
/ Products / Plant Extract
Muchikamu chino, isu tinonyanya kutaura nhengo yemasikirwo inotora zvinhu, zvakadai seBromelain, zvinoruruvara zveorangi, nezvimwewo.
Bromelain inyanzvi inowanikwa muinanfle juice uye muine chinanaini. Vanhu vanoshandisa iyo kurapa.
Bromelain inoshandiswa pakudzivirira kuzvimba (kuvhunika), kunyanya yemhino uye sinus, mushure mekuvhiyiwa kana kukuvara. Inoshandiswawo kumusana wefivha, kubata chirwere chinosanganisira kuvhara uye zvironda (ulcerative colitis), kubvisa zvitema uye zvakakuvadzwa mushure mekutsvaira (kubhadhara), kudzivirira kukanganwa kwemvura mumapapu (pulmonary edema) kukurudzira mutsara, kupedza kuvhara, kuvandudza kushandiswa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya, kudzivirira kenza, kupfupisa basa, nekubatsira muviri kubvisa mafuta.
Inoshandiswawo pakudzivirira kusuruvara kunetseka mushure mekunyanya kushanda. Kushandiswa uku kwave kwakadzidzwa, uye uchapupu hunoti bromelain haishandi nokuda kweizvi.
Vamwe vanhu vanoshandisa chigadzirwa (Phlogenzym) yeArthritis (osteoarthritis) inosanganisira bromelain ne trypsin (protein) uye rutin (chinhu chinowanikwa mu buckwheat). Bromelain anoshandiswa nenzira iyi inoratidzika kuti inoderedza marwadzo uye inovandudza maitiro anobata kune vanhu vane arthritis.
Izvo hazvina kukwana uchapupu hwezvesayenzi kuti uone kana kwete bromelain inobatsira chero ipi zvayo inoshandiswa.
Bromelain inoratidzika kuti inokonzera muviri kubudisa zvinhu zvinorwadza kurwadziwa nekuputika (kupisa).
Bromelain inewo makemikari anopesana nekukura kwemasero masero uye kunonoka kuvhara ropa.
Ananasini, imwe nyika yeSouth America uye chikamu chakanakidzwa chemishonga yevanhu veHawaiian, ndechimwe chezvinhu zvakapfuma zvakanyanya munyika ye enzyme bromelain. Icho chinoumbwa nezviverengero endopeptidases uye makemikari akaita se phosphatase, glucosidase, peroxidase, cellulase, escharase uye protease inhibitors. Kazhinji "bromelain" inotengeswa muchinyorwa kana kuwedzera mufananidzo inoreva maantimisi anobva pineapple stems kana cores, kwete kubva mumuviri wechibereko.
Zvinoshandiswa zvakanyanya sechirongwa chechisikiro kuporesa zvinhu zvose kubva pakusuruvara kusvika kune mishonga, pineapple haisi kungove neine enzyme chete, asiwo vitamini C, vitamini B1, potasium, manganese uye phytonutrients. Kunyange zvazvo chinanapine ine zvikomborero zvizhinji, chakavanzika chaicho chemasimba ayo ekuporesa ndechechokwadi bromelain.
Chii chinonzi bromelain chinoshandiswa kurapa? Munyika yezvokurapa, chimiro ichi chinonakidza chakagara chichishandiswa senhare inopesana nekuputika uye inopesana nekudzivirira. Kutsvakurudza kwakaratidzawo kuti ine fibrinolytic, antiedematous uye antithrombotic properties, zvinoreva kuti inobatsira kudzivirira ropa clots, edema uye kuzvimba. Munguva yakapfuura, iyi enzyme yakashandiswawo se-tenderizer yemhuka, chikonzero nokuti inobatsira kunyaradza uye kunonoka nguva, kupiswa kwemasumbu uye maitiro anobatana. Uyezve, zvidzidzo zvitsvakurudzo zvakawana uchapupu hwokuti iyi enzyme inomisa mamastasisita emapapu mumakwara ayo, iyo inoratidza kuti bromelain inogona kushandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, zvingangosanganisira kenza.
Kutarisa mabhuku ezvesayenzi, anosanganisira 1,600-plus nyaya zvinyorwa kuongororwa nemishonga yemishonga ye bromelain, inoratidza kuti yakashandiswa kurapa matambudziko akawanda ehutano, kusanganisira:
Kukuvadza kwemaviri, zvakadai seAACL misodzi
Arthritis, kurwadziwa pamwe chete uye osteoarthritis
Dambudziko rekugumburwa sezvinonzi kuora mwoyo kana chirwere
Chirwere chinoputira chirwere
Sinus zvirwere, zvakadai sebronchitis uye sinusitis
Kugadziriswa kwekuvhiya uye kupora kunononoka kweganda maronda kana kupisa
Kushaya kunyanya kwemishonga, kunyanya mishonga inorwisa mabhakitiriya, uye zviratidzo zvekushandisa mishonga
Zvinoshungurudza machena, Sevhisi orange, muto wakavhenekesa, bigarade orange, kana marmalade macorama anoreva citrus (Citrus × aurantium) uye michero yawo. Iyo inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, uye yakapararira nevanhu kumativi akawanda enyika. Miti yemusango inowanika pedyo nemisiduku duku mune dzakawanda uye yakavezwa nematanda eFlorida neBahamas mushure mokunge yaziviswa kunharaunda iyi kubva kuSpain, kwaive yakatangwa uye yakarimwa zvikuru zvikuru kutanga muzana remakore re10th neVaMoors. Zvinoshungurudza maruva zvinotengeswa sezvokudya zvinowedzera nekuda kwezvigadzirisa zvayo, kunyange zvazvo kuchengetedzwa kwedambudziko kusina uye kuri uye kwakabatanidzwa kune zvakasiyana zvemigumisiro inokuvadza kusanganisira kurwadza uye kuora mwoyo.
Mhando dzakawanda dzemunoramondi dzinoshandiswa pamafuta avo anokosha, uye dzinowanika muzvinonhuwira, zvinoshandiswa sekunhuvira kana se solvent. Iyo yevhisi yeAlanville yakasiyana-siyana inoshandiswa pakugadzira marmalade.
Zvinoshungurudza machena zvinoshandiswawo mumishonga yemishonga semhepo inokurudzira uye kudya kudya, nemhaka yezvibatanidza zvayo, synephrine. Zvinoshungurudza machena zvinowedzera zvakabatanidzwa nehuwandu hwemigumisiro yakakomba nekufa, uye mapoka ekushandisa anotsigira vanhu kuti vasatombo kushandisa michero yemishonga. Hachiri kupedziswa kana kunhuwa kwemaruva kunobata mamiriro ekurapa emwoyo uye nhengo dzomwoyo, pachako kana mune zvigadzirwa nezvimwe zvinhu. Zvinyorwa zvitsanangudzo zvinosunungurwa pamusoro pezvivako zvakasvibiswa nerunyanisi neNational Institute of Standards uye Technology (NIST), yezvibereko zvevhu, chikwata uye chimiro chakasimba chemuromo, pamwe chete neavo vakaiswa pamwe chete muchimwe chinhu.
Ronga avhareji Rating
Sort mutengo ne: yakaderera yakakwirira
Sort mutengo ne: kumusoro yakaderera
mutengo Popularity Rating
Ratidzai 8 Products
Ratidzai 16 Products
Ratidzai 24 Products
PolypodiuM Chimwe chepfu
Dr. Patrick Young on Cyproterone inopindira Powder (2701-50-0)
Michael McCoy on Cyproterone inopindira Powder (2701-50-0)
Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu Wekuwedzera huremu
Mashandiro anoita Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) kune anovaka muviri
Flibanserin Inobatsira Sei Mukadzi sePabonde Hormone
Zvese nezve Oxandrolone (Anavar), unofanirwa kuziva
Yakazara Yekutenga Nhungamiro 2019 YeSARM SR9009 Kuvaka muviri
Iko kusanzwisisika kusanzwisisika mune anabolic steroid yenyika
Copyright © 2019 aasraw Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
KUGADZIRIRA UYE KUDZIVISA: Ino saiti Chinyorwa Inotengeswa Ekutsvagisa Chete. Mitemo Yekutengesa Nyorera. Kwete Yekushandiswa Kwevanhu, kana Kurapa, Veterinary, kana Kushandisa Kweimba. www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.anonyij.com